Chinwiwa muHolland | Absolut Kufamba
maruuzen | | Updated on 15/04/2021 11:31 | Holland
Isu tese tinobvumirana kuti kana tichifunga nezveHolland, tinofunga nezveHeineken doro. Zviripachena hachisi icho chete chinhu chakadhakwa kana chinogona kunwiwa pano. Ndiri kureva, kune zvakawanda kupfuura Heineken uye zvakawanda kupfuura doro rakawanda. Asi zvadaro, Chiri sei chinwiwa muHolland?
Tichataura nezvazvo nhasi, nezve izvo zvinwiwa zvakakurumbira uye zvakajairika muHolland, kuve nerondedzero yezvatingaedze kana tichiendako, kupera kwedenda kuburikidza.
1 Holland nezvinwiwa zvadzo zvechinyakare
2 Doro muHolland
6 Tokuonai munt
Holland nezvinwiwa zvadzo zvechinyakare
Mukutungamira, iwe unofanirwa kuziva izvo dzakawanda zvechiDutch zvinwiwa zvine doro uye kuti dzimwe nguva havazi vese vane kuravira kunonakidza kwazvo kana ndizvo zvinotaurwa, zvakanaka. Nezve zera repamutemo rekunwa pano unogona kunwa doro newaini kubva gumi nematanhatu uye zvinwiwa zvine simba kubva pazera remakore gumi nemasere.
Kana zviri zvechinyakare zvinwiwa tinoverenga doro, koffie verkeed, nyowani mint tii kana vhesi, jenever liqueur uye mamwe anozivikanwa maDutch liqueurs, chocomel, advocaat ine brandy, kopstoot, korenwijn ...
Mhando mbiri dzinozivikanwa pano ndidzo Heineken naAmstel kunyangwe vagari veko vachivabvunza nekungoti, "pils" kana "biertje". Ndezve doro mbichana mbichana uye ivo vanozivikanwa kwazvo, asi ichokwadi zvakare kuti maDutch anonakidzwa zvechivanhu doro senge bokbier kana witbier.
Yekutanga idoro rakasarudzika rakagadzirwa muchirimo nekudonha iro rakasanganiswa nemalt uye rinotapira. Iko kunhuhwirira kwakasiyana mumwaka wese wegore, uye wakanyanya uye wakapatsanurwa mumatsutso. Nekudaro, kana iwe ukaenda kuAmsterdam kana mashizha adonha unogona kuenda kuMutambo weBobkier uye wozama.
Imwe doro, iro witbier doro, inewo zvinonhuwira uye inotapira, asi iri nyowani. MuNetherlands inowanzo shandiswa neremoni wedge uye mudziyo yekuipwanya pazasi pegirazi uye nokudaro kuburitsa kutsva kwayo uye acidity.
Uyewo pane dzimwe nguva apo doro rinopihwa nemusanganiswa wehuswas, "gruit", yakashandiswa mazana emakore apfuura uye yakabatsira kuchengetedza doro apo hops dzaisazivikanwa kuvepo. Iwe unogona kuraira izvi zvakasiyana muJopen muHaarlem, semuenzaniso.
Ichokwadi ndechekuti nhasi kune akawanda mabhawa anotengesa akasiyana siyana edoro. Iwe unogona kuenda kumabhawa kana iwe unogona kushanyira chaiwo mabheriki.
Zvakanaka, chinwiwa ichi chine zita revana asi pano munhu wese anochishandisa zvakaenzana. Pamazuva anotonhora zvakajairika kukumbira chocomel, iro rinozivikanwa zita rekutengeserana reizvi chokoreti inopisa uye zvinonyaradza.
Kune mimwe michina yekutengesa yeChocomel mune mamwe maresitorendi nemabhawa, inotengeswa musupamaketi nemuzvitoro zvekutengesa uye kune mhando dzinosanganisira chokoreti yakasviba, nekirimu kana mukaka wakaomeswa.
Chirevo chechiratidzo "de enige échte", chimwe chakadai Yokutanga uye yega. Ehezve kune dzimwe nzira, Tony Chocolonely mukaka iwe waunogona zvakare kutenga kwese muNetherlands, uye kunyanya muzvitoro zvinotengesa zvigadzirwa zve organic.
Holland ine mweya yakawanda uye imwe yeanonyanya kuzivikanwa muAmsterdam ndiyo Wynand Fockink doro. Rimwe doro rakakurumbira ndere T Nieuwe Diep. Ichokwadi ndechekuti maquequeurs ave achizivikanwa muHolland kubva muzana ramakore regumi nemanomwe, nguva yegoridhe yenyika idzi, nguva iyo vapfumi chete vaigona kutenga maquequeurs akagadzirwa neshuga inotengwa kunze, zvinonhuwira nemichero.
Panguva iyoyo, varombo, vanhuwo zvavo, vaingonwa doro kana jenever, asi vaisakwanisa kutenga doro. Kubva ipapo, doro yakashanda mumagirazi madiki akafanana ne tulip Ivo vanozadza kusvika pamuromo, saka hapana kukotama pamusoro uye kunyatso chenjera. Izvo zvinonzi zvinopihwa seizvi, kuda kufashukira, nekuti vatengesi veDutch vakati ivo vakazadza girazi nemari yavo, saka, ndapota, kumusoro kwezvose.
Chinyakare maDutch liqueurs anogadzirwa nekuwedzera zvinonhuwira kana michero, kana zvese zviri zviviri, kuchinwiwa chakadiridzwa chinogona kuva vodka kana jenever. Shuga inowedzerwa, musanganiswa unobvumidzwa kufamba marina kweinenge mwedzi uye mhedzisiro yacho inotapira mvura ine yakasimba uye yakajeka kuravira, iine zvakanyanya kudhakwa zvemukati.
Imwe yeanonyanya kufarirwa equeur flavors mu 'duindoor', yakavhenganiswa neorenji yakasimwa mumatope eNorth Sea. Zvakare kune maqueque ane cherry kana ndimu, senge yechinyakare yeItaly inozivikanwa selemoncello.
Pamusoro, pachiitiko chekutaura nezvezvinwiwa, takataura nezve jenever, ChiDutch vhezheni yeChirungu gin. Nhoroondo inoti jenever yakadyiwa nemasoja echiDutch panguva yehondo pakati peSpain neEngland muna 1630. Vanofungidzirwa kuti vakanwa hondo isati yatanga uye vakaigoverana nevatsigiri vavo veChirungu.
Varwi veChirungu pavakadzokera kunyika yavo vakauya nemukombero we "Dutch Courage", sezvo wainge wabhabhatidzwa. Ivo havana kunge vakabudirira, kuravira hakuna kuramba kwakafanana pakutanga, saka vakawedzera mamwe mahebhu nezvinonhuwira kuti iwedzere "kunwiwa" uye ndipo panobva mutsauko pakati peChirungu chemakwenzi gin neDutch jenever.
Iyo jenever Iyo inogadzirwa nekudzikisa zviyo uye kuzvinatsa nemajuniper michero, uye dzimwe nguva dzimwe mhando dzinoshandiswa kugadzira maqueque. Sezvo chiteshi cheRotterdam chaishandiswa kupinza zviyo kumatunhu ese akapoteredzwa, nzvimbo yeSchiedam, semuenzaniso, yaive nevanhu vane jenever distilleries uye ichiri kuoneka nanhasi.
heyi akasiyana masitaera ejenever: oude uye jonge. Musiyano haurevi panguva yavanosiiwa kuti vawedzere asi mune yavo yekubheka. Jenever oude inogadzirwa neyekare keke, nepo jonge iri nyowani maitiro. Kana iwe uchifarira kudzidza zvakawanda nezvenyaya iyi, unogona kushanyira iyo Bols imba muAmsterdam, kana iyo Jenever Museum, muSchiedam.
Tinobuda mudoro kwechinguva toenda kunonwa. Ichi chi mutsva mindi tii inova tsika kwazvo muHolland uye yakadhakwa zvakanyanya mukona chero yeAmsterdam. Iyo tii inopihwa mukapu yegirazi kana mukombe murefu, iine mvura inopisa uye mashoma mashoma matsva tii mashizha.
Iwe unogona kuwedzera huchi uye marimu emonimu uye iri yakapepuka sarudzo kana iwe usinga nzwe kunge kofi kana iwe uchida chimwe chinhu chinowedzera kugaya.
Kubva tii kusvika kofi pane nhanho imwe chete. Kana iwe uchida kusanganiswa kwe kofi nemukaka ipapo iyi kofi yeDutch ndeyako. Ndiyo yeDutch vhezheni yeiyo yakasarudzika caffè latte kana café au lait kana kofi nemukaka Kofi yemukaka unopisa iyo inowanzo gadzirwa ne espresso sehwaro iyo mukaka wakanyoroveswa unowedzerwa kuti uite furo. Kufara
Zita, koffie verkeerd, rinoreva kofi isiriyoNekuti kahawa yakajairika haina kana donhwe remukaka. Izvo zvakajairika chinhu kuodha iyi vhezheni mangwanani kana masikati, uye apo paine avo vanonwa zvinovava, vamwe vanowedzera shuga yemashuga. Mumakamuri kana mumabhawa inopihwa nekuki kana kudzayi sechiperekedzero.
Tinodzokera kuzvinwiwa zvinodhaka. Ichi chinwiwa chakagadzirwa kubva mazai, shuga uye bhurandi. Mhedzisiro yacho chinwiwa chegoridhe chinoshanda se hwaro hwekugadzira akawanda maokie uye madhiri.
Imwe yeakakurumbira anozivikanwa macocktails akagadzirwa neAdvocaat iSnowball: pano hafu nehafu zvakasanganiswa nemonade. Hongu, zvimwe chete zvinoshandiswa kuEngland, asi pano muHolland inowanzo shandiswa nefake yekwapu kirimu uye cocoa poda.
Izwi rekuti, advocaat, rinoreva gweta uye hazvingoerekani zvaitika. Iyo nyaya iri shure kwechinwiwa inoti advocaat kana advocatenborrel yakashandiswa kune avo vaifanirwa kutaura pamberi pevanhu vasati vazora huro yavo. Ndiani anotaura paruzhinji? Magweta.
Ichi chinwiwa chinowanikwa mune zvese zvakajairika Doro doro zvitoro kana mabhawa, kunyangwe mumaresitorendi kana maresitorendi. Kwete yekuvhiringidzwa nejenever. Ichi chinwiwa chakagadzirwa kubva muzviyo, asi kusiyana nejenever iyo inoshandisa juniper michero, iwo mabriji haasi pano. Saka, kuravira kwakasiyana kwazvo.
Kazhinji, iyo korenwijn yakashanda nechikafu cheDutch chikafu, Semuenzaniso, iye herring (Hove yehove).
Inogona kufananidzwa neyeChirungu chemota. Magirazi maviri anopihwa, rimwe redoro uye rimwe rejenever. Kutanga jenever akadhakwa, mune rimwe gulp, uyezve doro kudzikisira kutsva kwekutanga.
Kunakidzwa uye kwakasimba uye chiDutch, kana iwe uchida kuwana a 100% ruzivo rwenyika.
Haisi chimwe chinhu kunze kwechinwiwa cheorenji icho inowanikwa mumhemberero dzenyika, seZuva raMambo kana nhabvu nhabvu kana Zuva reRusununguko. Zviri doro rakasimba kwazvo, ine 30% doro, uye inowanzo kupihwa mu bara.
Iyo oranjebitter zvinovava uye zvine simba, inogadzirwa ne brandy, orenji uye orenji peel. Izvo zvakafanana neyechinyakare orenji liqueur asi iyo liqueur ine shuga mukati mayo. Zvinofanira kutaurwa kuti nhasi mabhodhoro mazhinji eOranjbitter ane shuga, saka haisisiri soooo zvinovava.
Kunyangwe iine zita reFrance, chinwiwa ichi chiDutch. Icho chinwiwa, iyo ChiDutch vhezheni yechinyakare cognac. Yaidaidzwa kunzi yakafanana nehama yayo yechiFrench, asi muma60 vhezheni yechiFrench yakawana zita rekuti Mavambo uyezve zita raifanira kuchinjwa.
Chinwiwa chakakurumbira ndechekusanganisa neCoca-Cola, kunyangwe isu tichifanira kukanganwa izvozvo ine doro rakawanda, ingangoita 35%. Doro rakasimba zvakanyanya ndiGoldstrike, ine doro rine 50%.
Parizvino, mamwe ma zvinwiwa muHolland asi zvirokwazvo, kune zvimwe. Parwendo rwako runotevera kuNetherlands, pfeka chiropa chinodzivirira uye…. kunakidzwa!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Chinwiwa muHolland
Iwo akanakisa mamisiyemu muAmerica